परिवारकै ३ जनाको ज्यान गएको घट्नाको २४ घण्टा नहुँदै खुल्यो यस्तो रहस्य! – PathivaraOnline
Home > समाचार > परिवारकै ३ जनाको ज्यान गएको घट्नाको २४ घण्टा नहुँदै खुल्यो यस्तो रहस्य!
admin September 12, 2020 September 12, 2020 समाचार, समाज	0
काठमाडौं । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–६, कुन्डोलमा शनिवार घरभित्रै ३ जनाको श’व फेला परेको घटनामा प्रहरीले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । घटनामा श्रीमती र छोराको ज्या’न लिएर श्रीमानले पनि देहत्याग गरेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रहरीले गरेको छ ।प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा प्रारम्भिक अनुमान यस्तो देखिएको हे । आमा र छोराको विस्तरामै ज्या’न गएको थियो भने अर्का एक जना अर्को कोठामा फेला परेका थिए ।
आमा र छोराको ज्या’न लि’एर श्रीमानले पनि वि’ष से’व’न गरेको हुनसक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ शुक्रवार करिव ५ बजेतिर एकै परिवारका तीन जनाको शव घरभित्र फेला परेको थियो। ३६ वर्षीय सुदीप अधिकारी, उनकी ३४ वर्षीया पत्नी सम्झना अधिकारी र १५ वर्षीय छोरा सुशान्त मृ त अवस्थामा फेला परेका थिए। शुक्रबार साँझ सवा ५ बजे अधिकारीका भाइ सुनीलले प्रहरीलाई खबर गरेपछि भक्तपुर प्रहरी परिसर र महानगरीय अपराध महाशाखाको टोली अपराधस्थलमा पुगेको थियो ।
त्यसक्रममा सुदिपसहित उनकी श्रीमती ३४ वर्षीया सम्झना र १५ वर्षीय छोरा सुशान्तको शव भेटिएको थियो । मध्यपुरथिमि नगरपालिका वडा नं ९ निकोसेरास्थित सुदिप अधिकारीको घर । यो घरमा सुदिपसहित श्रीमती सम्झना र छोरा सुशान्त मृत्यु बारे शुक्रबार अनुसन्धान गर्दै प्रहरी ।
तस्वीर ः रमेश गिरी
साढे तीन तले घरको भुई तलामा अधिकारी दम्पतीले किराना पसल संचालन गर्दै आएका थिए। शुक्रवार प्रहरीले महिला र किशोरको शव खाटमा फेला परेको जनाएको छ । पहिलो तलामा छोराको शव भेटिएको थियो। शवको टा’उकोमा चो ट परेको देखिएको छ। त्यस्तै शवलाई पिताम्वर ओडाइएको छ। दोस्रोमा सम्झनाको शव भेटिएको थियो । उनलाई पनि पिताम्बर ओढाएको अवस्थामा देखिएको थियो । विज्ञसहितको टोलीबाट जाँचबुझ गर्दा दुवै जनाको टाउकोमा गहिरो चो ट देखिएको थियो ।’
नेपाली विद्यार्थीको मृत्युको कारण खुल्यो, अष्ट्रेलियन नागरिकको नजरमा हिरो बनेर अस्ताए उनी – भिडियो सहित